Mayelana ne-GRACE - Grace Machinery CO., LTD
Umusa Imishini CO., LTD
I-GRACE isuselwa kuJiangsu China, futhi igcina intuthuko yomhlaba wonke ibhekile. Kugxilwe emkhakheni wokukhiqiza wemishini ye-extrusion epulasitiki, i-GRACE ngumhlinzeki wemishini ohlanganisa ukwakhiwa, i-R & D, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nensizakalo.
Amahhovisi aphesheya kwezilwandle
Amazwe Amakhava Ebhizinisi Nezifunda
Sinikeze ngemikhiqizo nezinsiza ezahlukahlukene kumakhasimende ethu avela emazweni angaphezu kwezi-106 nezifunda. Sihlala siqhubeka nokwenza ngcono imikhiqizo yethu ngokubambisana yisayensi, ubuchwepheshe kanye ne- "Human Element". Umbono wethu ukuthi sibe ngumhlinzeki wemishini ephezulu epulasitiki emhlabeni, ngokusekelwe emoyeni walesi simiso, asenziwanga okusemandleni ethu kuphela ukuhlangabezana nezidingo zemakethe, futhi siqhubeke nokuqinisa ukuncintisana kwethu. ngokusebenzisa komthungo oxhumana nabo bamakhasimende, abanolwazi lweminyaka kwezobuchwepheshe, amandla we-R & D, inqubo yokukhiqiza nobuchwepheshe besikhunta ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende. Siyaziqhenya ngokuthi ngokubambisana kwamakhasimende, imikhiqizo yethu igcina izinto ezintsha zihamba ngesivinini sezimfuno ezahlukahlukene.
Ukuphishekela kwethu imikhiqizo yobungcweti kunokuningi kwesipiliyoni semboni sokusebenzela amakhasimende ngenhloso, ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwemikhiqizo kukhombisa ukufaneleka kwamakhasimende nezimakethe.